Waa maxay heerka ugu sarreeya ee jacaylka? – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Arimaha Bulshada Waa maxay heerka ugu sarreeya ee jacaylka? – Banaadirsom
Waa maxay heerka ugu sarreeya ee jacaylka? – Banaadirsom
Jecayl waa qiiro qof u qaado ama hayo shey kale. Sidoo kale, Jecaylku waa qadarin, sharfid, xushmayn iyo ixtiraam qoto dheer oo qof u hayo qof kale.
Hadaba waa maxay Heerarka Jacaylku?
Heerka ugu sarreeya jacaylka:
Heerka ugu sareeya jacaylka ayaa ah Hibaynta, Hibayntu waa waalida jacaylka, iyada oo qofka wax jecel uu gaadho heerka waalida, qofka ayaa gaadha heerkan kadib markii uu muddo dheer wax jeclaado waliba dareenkiisa oo dhan siiyo qofka uu jecelyahay waliba qaab xisaab la’aan ah.
Dhanka kale Hibaynta ayaa ah luuqad ahaan in uu qofka wax jecel farxadiisa iyo Noloshiisa u Hubeeyo qofka uu jecelyahay ilaa inta uu ka dhimanayo.
Heerarka Kale ee Jacaylka:
Waa darajo timaada kadib heerka Hibaynta, waana heer fog oo jacaylka ah, waa mid uu qofka wax jecel waayo farxadiisa inta uu ka maqan yahay qofka uu jecelyahay waliba waa heer nolosha qofka wax jecel ku xidhantahay qofka uu jecelyahay.
Darajada tobnaad waxay la mid tahay darada Niyad jabka laakiin waxa ay qaadataa wakhti dheer, waxana ay soo cusboonaataa kadib guurka, waana heer ayna labada qof ee is qaba kala maarmi karin wax walba oo dhaca.
qofka wax jecel waxa uu heerkan gaadhaa wakhti dheer kadib, gaar ahaan marka uu soo maro heerarka kala duwan ee jacaylka, isku dhawaanshuhu waa heerka aasaasiga ah ee jacaylka guurka, waxana uu keenaa isku dheelitiran xidhiidhka labada qof, heerka isku dhawaanshuhu waa marxalada jacaylka saafiga ah waliba waa mid aan lagu dari karin been iyo wax la mid ah.
Previous articleArsenal Oo Qarka U Saaran In Ay Dhamaystiro Saxiixa Goolhaye Premier League Ah. – Banaadirsom
Next articleDamaca Deni iyo Axmed Madoobe oo horseedaya xarig-jiid siyaasadeed cusub